မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်တွေကို ရှင်းပစ်ပါ | FOX Sports Myanmar
အေအက်ဖ်စီ ဖလား | ဖေ‌ဖျောဝါရီ 13, 2020
မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်တွေကို ရှင်းပစ်ပါ
ဒီ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၂ရက်မှာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်နဲ့ ရှမ်းယူနိုက်တက် တို့ရဲ့ AFC Cup ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီလို အစချီလိုက်လို့ အဲဒီပွဲတွေက အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာ့ဘောလုံးကို စိတ်ပါဝင်စား တဲ့သူအများစုက ဒီပွဲတွေကို ကြည့်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းမိလို့ပါ။ ဒီပွဲ (၂)ပွဲကို ကြည့်ပြီး ခေါင်းထဲရောက်လာ တဲ့အတွေးကို မျှဝေမလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကလည်း ခုတလော လူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြင်မတူတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်မြင်တဲ့ ရှုထောင့်က တင်ပြတာသက်သက် ဖြစ်ပြီး ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ ဥပဒေစည်းမျဉ်းကို အကြမ်းဖျဉ်းလောက်ပဲနားလည်ထားတာကြောင့် ကျွန်တော့်အမြင်ကိုလည်း သိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ထောက်ပြခဲ့တာမျိုးရှိရင် ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံသွားမယ်လို့ ကြိုပြီး စကားပလ္လင်ခံထားချင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကတော့ MNL အသင်းတွေရဲ့ ပြည်ပကစားသမား ခေါ်ယူမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မီဒီယာလောကထဲကို စမရောက်ခင်ကတည်းက ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်ပြောင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုး မကြာခဏ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကစားသမားနဲ့ အသင်းနဲ့ ချုပ်ဆိုတဲ့ “ပရိုစာချုပ်” ဆိုတဲ့အရာကို တဖြည်းဖြည်း သိလာရလို့ပါပဲ။ သူတို့ဆီမှာ စာချုပ်နဲ့ အပြောင်းအရွှေ့စည်းမျဉ်းတွေ က တော်တော် အသေးစိတ်ကျတဲ့အနေအထားဖြစ်တာကြောင့် သေသေချာချာ နားလည်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲ တွေအများ ကြီးရှိပါတယ်။ MNL စတဲ့ ၂၀၀၉ ကစတင်ပြီး ပြည်ပကစားသမားတွေ စ၀င်လာပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတည်းက MNL အသင်း တွေဟာ အာဖရိကန် ကစားသမားအများစုကိုပဲ အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင် မရှိမဖြစ် ထည့်ပြောရမှာ ကစားသမားအေးဂျင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ နိုင်ငံခြားသားကစားသမား ခေါ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြေစမ်း ခရမ်းပျိုးနေတုန်းဖြစ်တာကြောင့် အေးဂျင့်လူလည်တွေရဲ့ လှည့်ကွက်တွေ ဂျင်းထည့်မှုတွေကို မကြာခဏ ခံခဲ့ရသလို ပြဿနာ တွေလည်း မျိုးစုံကြားခဲ့ရပါတယ်။(အားလုံးလည်း သိဖူးကြားဖူးကြမှာဖြစ်လို့ အကျယ်မရေးတော့ပါဘူး)။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်လည်း ဒီကစားသမားတွေ အခြေအနေကို သိချင်တာကြောင့် လိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့် ဖြစ်ခဲ့တော့ တချို့အတွင်းကိစ္စတွေလည်း သိခဲ့ရပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ယောက်ဆို “ဒီဖောရိမ်းပလေယာတွေက ဖီတင် တောင် မှန်အောင်မတွန်းနိုင်ဘူးဗျာ၊ ဒါပေမယ့် ဘော်ဒီမယှဉ်နိုင်တော့ ကိုယ့်ထက်သာသလိုဖြစ်နေတယ် ” ဆိုတာမျိုး ပြောလာတာမှတ်မိပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အာဖရိကန်ပလေယာတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာသလို တချို့ကလည်း ဘယ်အသင်း နဲ့မှစာချုပ်မရှိပေမယ့် ဒီမှာသောင်တင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအများကြီးမြင်လာရတယ်။ ခြေစွမ်းကြည့်တော့လည်း ဘောလုံးကန်တတ် တယ်ဆိုရုံအဆင့်ကများပေမယ့် သူတို့လူမျိုးသဘာဝအရ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားမှုနဲ့ မြန်ဆန်မှုတွေက ကိုယ့်ကစားသမားတွေနဲ့ အရမ်းကွာလွန်းတော့ ဘောလုံးကန်တတ်ရုံဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာ လက်ရွေးစင်အဆင့်ထဲ ဆရာကြီးလိုလို ဖြစ်နေတာ ပေါ့။ နောက်ပြီး ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပရိုလိဂ် စပြောင်းပြီး နိုင်ငံခြားကစားသမားခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေ တော်တော် များများမှာ လိုက်လုပ်စားနေကျဖြစ်တော့ လူရေလည်နေပြီးအကြောက်အလန့်လည်းမရှိ ဒီကအသင်းတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်း အားနည်းချက်တွေနားလည်လာတဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးရိုက်စားလုပ်တတ်လာကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အသင်းတွေက ဘာဖြစ်လို့ရှင်း မပစ်တာလဲ ဆိုပြီးမေးလာစရာရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောသလိုပဲ အားရှိပြီး မြန်ရုံလောက်နဲ့ ကစားရတာ အဆင်ပြေနေတယ် နောက်ပြီး တကယ်ခြေစွမ်းနဲ့ ပရိုစိတ်ပြည့်တဲ့ လက်ရွေးစင်အဆင့်ကစားသမားတွေထက် ဒီဂျင်းတွေက(၄-၅) ဆလောက်ကို ဈေးသက်သာနေတဲ့ အနေအထားကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ MNL စကတည်းက ပရိုပီသတဲ့ နိုင်ငံခြားကစားသမားဆိုလို့ (၃-၄) ယောက်လောက်ပဲ မြင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဂျင်းတွေက MNL မှာ အမြဲတမ်း ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်တွေဖြစ်နေတယ် ဘာကြောင့်လဲ။ ဒီလိုရှိပါတယ်။ ဘောလုံးကစားနည်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အခြေခံကစားတဲ့အတွက် သူတို့အာဖရိကန်ကစား သမားတွေက မာကျောမှု၊ လျှင်မြန်မှု၊ အားရှိမှု တွေမှာ တခြားလူမျိုး အားလုံးထက်ကိုသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးကို အဆင့်မြင့်မြင့်ကစားနိုင်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့အားသာချက်တွေထက် နည်းစနစ်၊ နည်းဗျူဟာနဲ့ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုတွေက ပိုအရေးကြီးလာပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လောက်အားရှိရှိ ဘယ်လောက်မြန်မြန် နည်းစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတဲ့ ခံစစ်နဲ့ တွေ့ရင်မကျော်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလို အာဖရိကန်တွေက ပရိုလိဂ်တွေမှာ လုပ်စားနေခဲ့တာကြာပြီဖြစ်လို့ ဒီအရှေ့တောင် အာရှ ကြောမှာ လိဂ်တိုင်းရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းလိဂ်၊ ဗွီလိဂ်နဲ့ အိန္ဒိယ လိဂ်တွေမှာ ဂိုးသွင်းဘုရင်စာရင်းကို လေ့လာကြည့်ရင် ဒီသဘောတရားကို သိနိုင်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ဒီလိဂ်တွေမှာ ကစားနေတဲ့ အသင်းတွေဟာ ဘောလုံးကို နည်းစနစ် နည်းဗျူဟာကျကျ ကစားနိုင်နေပြီး ဘောလုံးသေချာမကန်တတ်ပဲ အားရှိရုံနဲ့ ကစားသမားတွေတိုးလို့မရတော့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဒီမှာတော့ရနေတယ်ဆိုတာ က မြန်မာ အသင်းတွေ နည်းစနစ်တကျမကန်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသက်သေပါပဲ။ အခုကြားရက် AFC Cup မှာ ရန်ကုန်နဲ့ ရှမ်းအတွက် ၀င်ကစားပေးသွားတဲ့ အာဖရိကန်ပလေယာတွေ ခြေစွမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘောလုံးကိုနည်းနည်းပါးပါးနားလည်ရုံနဲ့သိကြပါလိမ့် မယ်။ ပထမရန်ကုန်နဲ့ နေ့ကဆို ပြည်တွင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အီမန်ညူရယ် ဆိုဂိုးသာသွင်းနိုင်တာ(ဂိုးကလည်း တည်ကန် ဘော ခေါင်းတိုက်တာပါ) ကျန်တဲ့အချိန်မှာ သူကအသင်းကိုအကျိုးမပြုတဲ့အပြင် တခြားကစားသမားတွေတည်လာတဲ့ တိုက်စစ်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။(မယုံရင် ပြန်ကြည့်ပါ)။ ဒီလိုကစားသမားမျိုး အသင်းမှာ ပါနေတဲ့အတွက် ဘာဖြစ်လဲ။ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသလောက်တော့ သူလိုကိုယ်လို အသင်းနဲ့တွေ့ရင် အားနဲ့တိုး ကံကောင်းရင် ဂိုး ပေါ့။ ဒီထက်ဘာမှမပိုပါဘူး။ နောက်ပြီး သူတို့ဆီက ကိုယ့်ကစားသမားတွေ ဘာယူလို့ရမလဲ။ ကိုယ့်လောက်တောင် Ball Skill မကောင်းတဲ့ Player တွေဆီက ဘာမှမရနိုင်ပါဘူး။ သူ့ကိုထည့်ကစားလို့ Local ကစားသမားထဲက တက်လမ်းရှိတဲ့ ကစားသမား တချို့တောင် နစ်နာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မပါရင်ရော။ ကိုယ့်အသင်းမှာ Local ချည်းရှိနေရင် သူတို့ပါသလောက်တော့ ပြိုင်ဖက်ကိုဂိုးသွင်းရမလွယ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဒီလိုအတိုင်းချည်းသွားတာအဆင်ပြေမယ့်သဘောမရှိဘဲ ကလပ်အ သင်းက ပြည်တွင်းမှာချန်ပီယံဖြစ်လိုက် AFC Cup သွားကန်တော့ ဇုန်မှာတောင် တိုင်ပတ်လိုက်ဆိုတဲ့အဆင့်က ဘယ်တော့ တက်တော့မလဲ။ အသင်းကို နည်းစနစ်တကျတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ နည်းပြကို ငွေကုန်ခံခေါ် အချိန်ပေးပြီး သည်းခံမှ ဖြစ်မှာ ဆိုတော့ လက်ရှိMNL Boss တွေအနေအထားနဲ့ ဖြစ်နိုင်မယ့်သဘောမရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ဒါကိုပြင်နိုင်ဖို့ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ MFF အနေနဲ့ Foreign Player အဆင့်အတန်းကို သတ်မှတ် ကန့်သတ်လိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်။
မင်းတို့ပြောတာလွယ်တယ် လက်တွေ့လည်းလာလုပ်ကြည့်ဦး လို့ပြောလည်း ခံရမှာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတစ်နှစ် ပြီးရင် ချူသံပါအောင် ငြီးနေပြီး အသင်းပြန်အပ်မယ်တကဲကဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူဌေးမင်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့လိဂ်မှာ ငွေပိုကုန် မယ့်အခြေအနေကို ပြောင်းဖို့ဆိုတာ မလွယ်တာမှ တော်တော့်ကိုမလွယ်ဘူးဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတိုင်း ဆက်သွား ရင်လည်း ဂျင်းမိရင်းအချိန်ကုန်တာကလွဲရင်ဘာအကျိုးမှမရှိတာကို ဆက်ခံရမှာပဲ။ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု ဆီကိုသွားဖို့အတွက် ဒီအာဖရိကန်ဂျင်းတွေဟာ အမှိုက်ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကိုရှင်းဖို့မကြိုးစားရင် အမှိုက်ပုံဆိုတဲ့ဘ၀ကနေ ဘယ်မှရှေ့ဆက်လို့ ရမယ် မထင်ဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေတော့ . . .
ဒီ အဂဿၝ၊ ဗုဒ္ဌဟူး ၂ရက်မြာ ရန်ကုန်ယိူုိံက်တက်နဲႛ ရမြ်းယိူုိံက်တက် တိုႛရဲႚ AFC Cup ပြဲစဉ်တေကြိုကည့်ူဖစ်တယ်။ ဒီလို အစခဵီလိုက်လိုႛ အဲဒီပြဲတေကြ အူဖစ်အပဵက်တေကြိုေူပာမြာမဟုတ်ပၝဘူး။ ဘာလိုႛလဲဆိုတောူ့မန်မာ့ဘောလုံးကို စိတ်ပၝဝင်စား တဲ့သူအမဵားစုက ဒီပြဲတေကြိုကည့်ူဖစ်တဲ့အနေအထားမြာရြိတယ်လိုႛ ခန်ႛမနြ်းမိလိုႛပၝ။ ဒီပြဲ (၂)ပြဲကိုကည့်္ဘပီး ခေၝင်းထဲရောက်လာ တဲ့အတြေးကို မ္တွဝေမလိုႛူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီအေုကာင်းအရာကလည်း ခုတလော လူေူပာမဵားနေတဲ့အေုကာင်းအရာူဖစ်္ဘပီး ဒီကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ အူမင်မတူတဲ့လူတေလြည်းရြိုိံင်ပၝတယ်။ ကဵန်ြတော်ကတော့ ကဵန်ြတော်ူမင်တဲ့ ရထြောင့်က တင်ူပတာသက်သက်ူဖစ်္ဘပီး ဒီအပိုင်းနဲႛပတ်သက်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲႛ ဥပဒေစည်းမဵဉ်းကို အုကမ်းဖဵဉ်းလောက်ပဲနားလည်ထားတာေုကာင့် ကဵန်ြတော့်အူမင်ကိုလည်း သိရြိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိလ်ြမဵား ထောက်ူပခဲ့တာမဵြိးရြိရင် ကေဵကေဵနပ်နပ်လက်ခံသြားမယ်လိုႛ ဋ္ဌက္ဘြိပီး စကားပလ္ထင်ခံထားခဵင်ပၝတယ်။ အေုကာင်းအရာကတော့ MNL အသင်းတေရြဲႚူပည်ပကစားသမား ခေၞယူမနြဲႛ ပတ်သက်တဲ့ ကိင်္စူဖစ်ပၝတယ်။
ကဵန်ြတော် မီဒီယာလောကထဲကို စမရောက်ခင်ကတည်းက ဥရောပဘောလုံးလောကမြာူဖစ်ခဲ့တဲ့ အေူပာင်းအရြေႚတြေ နဲႛပတ်သက်္ဘပီး အူမင်ေူပာင်းရတဲ့အူဖစ်မဵြိး မုကာခဏ ဋ္ဌကံရြတတ်ပၝတယ်။ ဘာေုကာင့်လည်းဆိုတော့ ကစားသမားနဲႛ အသင်းနဲႛ ခဵပ်ြဆိုတဲ့ “ပရိုစာခဵပြ်” ဆိုတဲ့အရာကို တူဖည်ူးဖည်း သိလာရလိုႛပၝပဲ။ သူတိုႛဆီမြာ စာခဵပ်ြနဲႛ အေူပာင်းအရြေႚစည်းမဵဉ်းတြေ က တော်တော် အသေးစိတ်ကဵတဲ့အနေအထာူးဖစ်တာေုကာင့် သေသေခဵာခဵာ နားလည်ိုိံင်ဖိုႛ အခက်အခဲ တေအြမဵား ဋ္ဌကီးရြိပၝတယ်။ MNL စတဲ့ ၂၀ဝ၉ ကစတင်္ဘပီူးပည်ပကစားသမားတြေ စဝင်လာပၝတယ်။ အဲဒီတုန်းကတည်းက MNL အသင်း တေဟြာ အာဖရိကန် ကစားသမားအမဵားစုကိုပဲ အသုံူးပခြဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။ အေူပာင်းအရြေႚနဲႛပတ်သက်လိုႛေူပာရရင် မရြိမူဖစ် ထည့်ေူပာရမြာ ကစားသမားအေးဂဵင့်ူဖစ်ပၝတယ်။ အဲဒီတုန်းကတောိုိံ့င်ငူံခားသားကစားသမား ခေၞယူမနြဲႛပတ်သက်္ဘပီးေူမစမ်း ခရမ်းပဵြိးနေတုန်ူးဖစ်တာေုကာင့် အေးဂဵင့်လူလည်တေရြဲႚ လညြ့်ကက်ြတြေ ဂဵင်းထည့်မတြေကြို မုကာခဏ ခံခဲ့ရသလိုင်္ပံနာ တေလြည်း မဵြိးစုံကားခဲ့ရပၝတယ်။(အားလုံးလည်း သိဖူုးကားဖူုးကမြာူဖစ်လိုႛ အကဵယ်မရေးတော့ပၝဘူး)။
အဲဒီအခဵိန်တုန်းက ကဵန်ြတော်လည်း ဒီကစားသမားတြေ အေူခအနေကို သိခဵင်တာေုကာင့် လိုက်မေူးမန်းစုံစမ်ုးကည့်ူဖစ်ခဲ့တော့ တခဵြိႚအတငြ်းကိင်္စတေလြည်း သိခဲ့ရပၝတယ်။ ကစားသမားတစ်ယောက်ဆို “ဒီဖောရိမ်းပလေယာတေကြ ဖီတင် တောင် မန်ြအောင်မတနြ်ိးုိံင်ဘူးဗဵာ၊ ဒၝပေမယ့် ဘော်ဒီမယဉြ်ိုိံင်တော့ ကိုယ့်ထက်သာသလိုဖစ်နေတယ် ” ဆိုတာမဵြိးေူပာလာတာမတ်ြမိပၝတယ်။ နောက်ပိုင်း အာဖရိကန်ပလေယာတြေ တူဖည်ူးဖည်းမဵားလာသလို တခဵြိႚကလည်း ဘယ်အသင်း နဲႛမစြာခဵပ်ြမရြိပေမယ့် ဒီမြာသောင်တင်နေတဲ့ပုံစံမဵြိးအမဵားဋ္ဌကီူးမင်လာရတယ်။ေူခစမြ်ုးကည့်တော့လည်း ဘောလုံးကန်တတ် တယ်ဆိုရုံအဆင့်ကမဵားပေမယ့် သူတိုႛလူမဵြိးသဘာဝအရ ကိုယ်ခိံ္ဌာဋ္ဌကီးထြားမနြဲႛူမန်ဆန်မတြေကြ ကိုယ့်ကစားသမားတေနြဲႛ အရမ်းကြာလနြ်းတော့ ဘောလုံးကန်တတ်ရုံဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမြာ လက်ရြေးစင်အဆင့်ထဲ ဆရာဋ္ဌကီးလိုလိုဖစ်နေတာ ပေၝ့။ နောက်္ဘပီး ဒီပုဂ္ဂိလ်ြတေကြ ပရိုလိဂ် စေူပာင်း္ဘပီိးုိံင်ငူံခားကစားသမားခေၞတဲ့္ဘပိင်ြပြဲလုပ်တဲ့ အာရြိုိံင်ငံတြေ တော်တော် မဵားမဵားမြာ လိုက်လုပ်စားနေကဵူဖစ်တော့ လူရေလည်န္ဘေပီးအေုကာက်အလန်ႛလည်းမရြိ ဒီကအသင်းတေရြဲႚ စီမံခန်ႛခြဲမပြိုင်း အားနည်းခဵက်တေနြားလည်လာတဲ့အခဵိန်မြာ ပ္ဘိုပီးရိုက်စားလုပ်တတ်လာုကပၝတယ်။ ဒၝဆိုရင် အသင်းတေကြ ဘာူဖစ်လိုႛရငြ်း မပစ်တာလဲ ဆ္ဘိုပီးမေးလာစရာရြိပၝတယ်။ အပေၞမြာေူပာသလိုပဲ အားရြ္ဘိပီူးမန်ရုံလောက်နဲႛ ကစားရတာ အဆင်ေူပနေတယ် နောက်္ဘပီး တကယ်ေူခစမြ်းနဲႛ ပရိုစိတ်ူပည့်တဲ့ လက်ရြေးစင်အဆင့်ကစားသမားတေထြက် ဒီဂဵင်းတေကြ(၄-၅) ဆလောက်ကို ဈေးသက်သာနေတဲ့ အနေအထားေုကာင့်ပၝ။ ကဵန်ြတော်တိုႛ MNL စကတည်းက ပရိုပီသတဲိုိံ့င်ငူံခားကစားသမားဆိုလိုႛ (၃-၄) ယောက်လောက်ပဲူမင်ဖူးပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ဒီဂဵင်းတေကြ MNL မြာ အ္ဘမဲတမ်း ထိပ်တန်းဂိုးသငြ်းရင်ြတြေူဖစ်နေတယ် ဘာေုကာင့်လဲ။ ဒီလိုရြိပၝတယ်။ ဘောလုံးကစားနည်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အေူခခံကစားတဲ့အတကြ် သူတိုႛအာဖရိကန်ကစား သမားတေကြ မာကေဵာမြ၊ လ္တွင်ူမန်မြ၊ အားရြိမြ တေမြာ တူခားလူမဵြိး အားလုံးထက်ကိုသာပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ဘောလုံးကို အဆင့်ူမင့်ူမင့်ကစာိးုိံင်လာတဲ့အခၝမြာ သူတိုႛအားသာခဵက်တေထြက် နည်းစနစ်၊ နည်းဗဵဟြာနဲႛ ပူးပေၝင်းလပ်ြရြားမတြေကြ ပိုအရေးဋ္ဌကီးလာပၝတယ်။ သူတိုႛဘယ်လောက်အားရြိရြိ ဘယ်လောက်ူမန်ူမန် နည်းစနစ်တကဵတည်ဆောက်ထားတဲ့ ခံစစ်နဲႛ တြေႚရင်မကေဵာ်ိုိံင်ပၝဘူး။ ဒီလို အာဖရိကန်တေကြ ပရိုလိဂ်တေမြာ လုပ်စားနေခဲ့တာုက္ဘာပီူဖစ်လိုႛ ဒီအရြေႚတောင် အာရြေုကာမြာ လိဂ်တိုင်းရြိနေပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ထိုင်းလိဂ်၊ ဗီလြိဂ်နဲႛ အိံ္ဋိယ လိဂ်တေမြာ ဂိုးသငြ်းဘုရင်စာရင်းကို လေ့လာုကည့်ရင် ဒီသဘောတရားကို သိုိံင်ပၝတယ်။
ေူပာခဵင်တာက ဒီလိဂ်တေမြာ ကစားနေတဲ့ အသင်းတေဟြာ ဘောလုံးကို နည်းစနစ် နည်းဗဵဟြာကဵကဵ ကစာိးုိံင်န္ဘေပီး ဘောလုံးသေခဵာမကန်တတ်ပဲ အားရြိရုံနဲႛ ကစားသမားတေတြိုးလိုႛမရတော့ဘူး ဆိုတာပၝပဲ။ ဒီမြာတော့ရနေတယ်ဆိုတာ ကူမန်မာ အသင်းတြေ နည်းစနစ်တကဵမကန်ိုိံင်သေးဘူးဆိုတာသက်သေပၝပဲ။ အခုကားရက် AFC Cup မြာ ရန်ကုန်နဲႛ ရမြ်းအတကြ် ဝင်ကစားပေးသြားတဲ့ အာဖရိကန်ပလေယာတြေေူခစမြ်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဘောလုံးကိုနည်းနည်းပၝးပၝးနားလည်ရုံနဲႛသိုကပၝလိမ့် မယ်။ ပထမရန်ကုန်နဲႛ နေႛကဆိုပည်တငြ်းမြာေူခစမြ်ူးပနေတဲ့ အီမန်ညရြယ် ဆိုဂိုးသာသငြ်ိးုိံင်တာ(ဂိုးကလည်း တည်ကန် ဘော ခေၝင်းတိုက်တာပၝ) ကဵန်တဲ့အခဵိန်မြာ သူကအသင်းကိုအကဵြိးမူပတြဲ့အူပင် တူခားကစားသမားတေတြည်လာတဲ့ တိုက်စစ်ကို ဖဵက်ဆီးလိုက်တဲ့အနေအထားတေအြမဵားဋ္ဌကီးရြိခဲ့ပၝတယ်။(မယုံရင်ူပန်ုကည့်ပၝ)။ ဒီလိုကစားသမားမဵြိး အသင်းမြာ ပၝနေတဲ့အတကြ် ဘာူဖစ်လဲ။ ကဵန်ြတော်စဉ်းစားမိသလောက်တော့ သူလိုကိုယ်လို အသင်းနဲႛတြေႛရင် အားနဲ့တိုး ကံကောင်းရင် ဂိုး ပေၝ့။ ဒီထက်ဘာမမြပိုပၝဘူး။ နောက်္ဘပီး သူတိုႛဆီက ကိုယ့်ကစားသမားတြေ ဘာယူလိုႛရမလဲ။ ကိုယ့်လောက်တောင် Ball Skill မကောင်းတဲ့ Player တေဆြီက ဘာမမြရိုိံင်ပၝဘူး။ သူႚကိုထည့်ကစားလိုႛ Local ကစားသမားထဲက တက်လမ်းရြိတဲ့ ကစားသမား တခဵြိႚတောင် နစ်နာတယ်လိုႛဆိုိုိံင်ပၝတယ်။ သူတိုႛမပၝရင်ရော။ ကိုယ့်အသင်းမြာ Local ခဵည်းရြိနေရင် သူတိုႛပၝသလောက်တော့္ဘပိင်ြဖက်ကိုဂိုးသငြ်းရမလယြ်ိုိံင်ဘူး။ ဒၝပေမယ့် ရေရည်ြမြာ ဒီလိုအတိုင်းခဵည်းသြားတာအဆင်ေူပမယ့်သဘောမရြိဘဲ ကလပ်အ သင်းကူပည်တငြ်းမြာခဵန်ပီယူံဖစ်လိုက် AFC Cup သြားကန်တော့ ဇုန်မြာတောင် တိုင်ပတ်လိုက်ဆိုတဲ့အဆင့်က ဘယ်တော့ တက်တော့မလဲ။ အသင်းကို နည်းစနစ်တကဵတည်ဆောက်ိုိံင်တဲ့ နည်ူးပကို ငေကြုန်ခံခေၞ အခဵိန်ပေး္ဘပီး သည်းခံမြူဖစ်မြာ ဆိုတော့ လက်ရြိMNL Boss တေအြနေအထားနဲႛူဖစ်ိုိံင်မယ့်သဘောမရြိပၝဘူး။ ဒီတော့ ဒၝကိုပင်ိုိံင်ဖိုႛ တစ်ခုပဲရြိပၝတယ်။ MFF အနေနဲႛ Foreign Player အဆင့်အတန်းကို သတ်မတြ် ကန်ႛသတ်လိုက်ရင်တော့ အဆင်ေူပသြာိးုိံင်ပၝတယ်။
မင်းတိုႛေူပာတာလယ်ြတယ် လက်တြေႚလည်းလာလုပ်ုကည့်ဦး လိုႛေူပာလည်း ခံရမြာပၝပဲ။ ဟုတ်ပၝတယ်။္ဘပိင်ြပြဲတစ်ိံစ်္ဘြပီးရင် ခဵသြံပၝအောင်္ဘငီးန္ဘေပီး အသင်ူးပန်အပ်မယ်တကဲကဲူဖစ်နေတဲ့ သူဌေးမင်းတေနြဲႛ တည်ဆောက်ထားတဲ့လိဂ်မြာ ငေပြိုကုန် မယ့်အေူခအနေကိုေူပာင်းဖိုႛဆိုတာ မလယ်ြတာမြ တော်တော့်ကိုမလယ်ြဘူးဆိုတာနားလည်ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ဒီအတိုင်း ဆက်သြား ရင်လည်း ဂဵင်းမိရင်းအခဵိန်ကုန်တာကလြဲရင်ဘာအကဵြိးမမြရြိတာကို ဆက်ခံရမြာပဲ။ေူပာင်းလဲတိုးတက်မြ ဆီကိုသြားဖိုႛအတကြ် ဒီအာဖရိကန်ဂဵင်းတေဟြာ အမြိက်ူဖစ်နေတာပၝ။ ဒၝကိုရငြ်းဖိုႛမဋ္ဌကြိးစားရင် အမြိက်ပုံဆိုတဲ့ဘဝကနေ ဘယ်မရြေႚဆက်လိုႛ ရမယ် မထင်ဘူးလိုႛပဲေူပာပၝရစေတော့ . . .
Home Football AFC Cup မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်တွေကို ရှင်းပစ်ပါ